लगानीकर्ताको खरबौं रुपैयाँ स्वाहा भइसक्दा पनि के हेरेर बसेका छन् अर्थमन्त्री खतिवडा ? – ताजा समाचार
लगानीकर्ताको खरबौं रुपैयाँ स्वाहा भइसक्दा पनि के हेरेर बसेका छन् अर्थमन्त्री खतिवडा ?
काठमाडौं : पुँजी बजार धराशायी हुनै लाग्दा सरकार र नियामक निकाय कानमा तेल हालेर बसेका छन् । बजारमा दिनहुँ लगानीकर्ताले खरबौं रुपैयाँ गुमाइरहेका छन् । तर उनीहरु केही पनि थाहा नभएजस्तो गरी बसिरहेका छन् । दिनुहँ दोहोरो अंकले बजार घट्दा आम लगानीकर्ताको आत्मबल गिरेको गिर्यै छ । सरकार, विशेषगरी, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा रमिता हेरेर बसेका छन् ।
जनताको अरबौं रुपैयाँ स्वाहा हुँदा पनि कुनै काम नगर्ने तर पदमा भने टाँसिरहने लोभी नेतृत्वका कारण आम लगानीकर्ताले सास्ती खेप्नु परेको हो । बजारमा अनेकन थरीका समस्या तेर्साएर लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने खेलमा अर्थ मन्त्रालय नै तल्लीन भएको लगानीकर्ताले अनुभूति गर्न थालेका छन् । पुँजीगत लाभकरमा ल्याप्चे प्रथा अझै समाधान गरिएको छैन । सीडीएसलाई निर्देशन दिएजस्तो गरेर धितोपत्र बोर्ड पनि त्यत्तिकै हराएको छ ।
तालुकदार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा कसैका कुरा नसुन्ने, आफूलाई निकै विज्ञता ठान्ने प्रवृत्तिका कारण पुँजी बजारसहित समग्र अर्थतन्त्रले दिनहुँ थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यतिबेला आम लगानीकर्ताको मनोबल निकै गिरेको छ । तीन महिनादेखि लगातार बजार घट्दा आत्मबल झनझन् गिर्नु स्वभाविक पनि हो । सुधारका अनेकन काम थाँती राखिएका छन् ।
उपत्यका बाहिर जान चाहने ब्रोकरहरुलाई रोकेर राख्ने काम भएको छ । मार्जिन लेन्डिङमा धितोपत्र बोर्डले हलो अड्काउने काम गरेको छ । अनेकन बाहनामा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नबाट रोक्ने हर्कत भएका छन् । आम लगानीकर्ताले लामो समयसम्म धैर्यता गरिरहँदा पनि आत्मबल बढाउने कुनै पनि खबर आउन नसकेपछि बजार झनै तल गएको हो ।
यस्तो बेला लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने खबर आउन जरुरी छ । जबसम्म सरकार र नियामक निकायले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने कदम अघि सार्दैन तबसम्म बजारमा सुधार हुने सम्भावना देखिंदैन । लगानीकर्ताले निकै लामो समयदेखि धैर्य गर्दै आएका हुन् । तर धैर्यताको पनि सीमा हुन्छ । अब त्यो सीमा टुट्न लागेको छ । यदि, बजारलाई बचाउने हो भने तथा आम लगानीकर्ताको सम्पति खरानी हुनबाट जोगाउने हो भने नियामक निकायले तत्काल उचित कदम चाल्नैपर्छ ।
होइन भने लगानीकर्ताले कुनै पनि बेला अप्रिय निर्णय लिन सक्छन् । बजारमा सेयरको भाउ निकै सस्तो भएको छ । लगातार घट्दा दर्जनौं कम्पनी आइपीओ भाउ भन्दा तल आएका छन् । आकर्षक वित्तीय सूचक भएका कम्पनीको भाउ पनि निकै सस्तो छ । मूल्य–आम्दानी अनुपात, प्रतिसेयर आम्दानी, नेटवर्थ लगायतका सूचकलाई अध्ययन गर्दा पनि भाउ निकै सस्तो देखिन्छ । तर लगानीकर्ताको आत्मबल निरन्तर खस्किंदा उनीहरु बजार प्रवेश गर्न नसकेका हुन् ।
अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : February 26th, 2020,